Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Degmada Afgooye iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga… – Hagaag.com
Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Degmada Afgooye iyo qaar ka mid ah deegaanada hoostaga…
Deegaanka Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo tuulooyin hoos taga ayaa waxaa saacadihii la soo dhaafay ku fatahay Wabiga Shabeelle kaas oo khasaarooyin kala duwan u geystay guryo, beero iyo goobo ganacsi.
Xaafadaha degmada Afgooye ee uu ku fatahay Wabiga ayaa waxaa ka mid Baan-guri iyo damaley.
Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax iyo xubno la socday oo kormeer ku tegay goobaha uu ku fatahay Wabiga ayaa waxaa uu sheegay inay wadaan dadaalo lagu xirayo biyaha Wabiga ee soo fatahay.
Sidoo kale Guddoomiye Najax ayaa waxaa uu tilmaamay inay xireen ilaa 4 meel oo biyaha Wabiga ay soo jabsadeen, isla markaana uu weli socdo gurmad xoogan.
Waxaa kaloo Guddoomiye Najax ugu baaqay Guddiga Gurmadka dowladda Federaalka iyo kan Koonfur Galbeed inay ka qeyb qaatan gurmadka loo sameynayo dadka uu Shabeellaha Hoose ku saameeyay fatahaada Wabiga.
Roobab xooggan oo ka da’ay degmooyinka gobolka Banaadir iyo Afgooye ayaa saameyn ku reebay degmooyinkaasi, waxaana uu geystay khasaarooyin isugu jira naf iyo maal.